Imithetho emisha yeBuckeye Lake Ohio njengoMsebenzi Wokudonsa Uyakhula
I-Ohio DNR: Imithetho emisha yeLuckeye Lake
Kwangathi 1, 2015
Emizamweni yokwandisa ukuqwashisa ngezokuphepha kanye nokukhuthaza amathuba wokuzijabulisa eBuckeye Lake, uMnyango Wezemvelo wase-Ohio (ODNR) ushintsha imithetho yawo yesikebhe iBuckeye Lake ngenkathi ilawulwa endaweni ephakeme echibini.
I-ODNR iqoke futhi izomaka kahle indawo ethile ye-Speed ​​Zone engxenyeni esentshonalanga yaleli chibi ukuze ivumele abagibeli bezikebhe ukusebenzisa amandla abo ngamandla amakhulu kunejubane elikhulu.
"Akungabazeki, iBuckeye Lake izoba yigugu esifundeni sase-Ohio uma sekuvele idamu elisha, kodwa ngifuna ukukhumbuza wonke umuntu ukuthi leli chibi selisavulekile ngokuhweba," kusho uMqondisi we-ODNR uJames Zehringer.
Umsebenzi wokususa ukhuphukile echibini leBuckeye futhi, futhi izindawo zokutshala kabusha ezisebenzayo zizofakwa ilebuli efanele yizimpawu zomuntu ezintantayo. Ama-boilers ayelulekwa ukuthi alandele izindlela zokuphepha ezisebenza kahle ezikebheni futhi agqoke kahle ijakhethi yempilo evunyelwe ngaso sonke isikhathi lapho esemanzini.